Al-Shabaab oo afduubtay Qoysas reer Miyi ah | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo afduubtay Qoysas reer Miyi ah
Kooxda Al-Shabaab ayaa afduubatay qoysas reer Miyi ah oo xoolo dhaqato ah, sida Keydmedia Online ay ka ogaaatay illo xog-ogaal ah, lamana oga sababta ka dambeysa afduubka.
DIINSOOR, Soomaaliya - Maleeyshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa saakay waabarigii qooysas badan oo xoolo dhaqata ah ka afduubay duleedka degmada Diinsoor gar ahaan agagaarka Xamarwado.
Lama oga halka ay la’aadeen iyo sababta loo afduubtay qoysaskan oo halkaas degaan ku ahaa in muddo ah, sida ay ogaatay Keydmedia Online.
Kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan ganacsatada ku dhaqan magaalooyinka waaweyn waxay ka qaataan lacago baad ah, kuwaasoo ay ugu yeeraan (Sakawaat) ciddii diiddana waxaa lagu qaadaa weerar sababi kara dhimasho ama bur-bur hantiyadeed.
Kooxda ayaa qorshaheeda dhaqaalo uruursiga sii ballaarisay, waxayna billaabeen in ay ka uruursadaan lacagahaasi dadka reer miyiga ah ee xoolo dhaqatada ah, waxaana qofkii diida sidoo kale la weeraraa halka uu daggan yahay.
Lama xaqiijin karo afduubka loo geystay qoysaskani waxa uu salka ku hayo.
Indhacadde: “Shaakir iyo Maxamuud waa kaankare”
Warar 25 October 2021 18:43
Jeneraal Yuusuf Indhacadde, oo dhawaan warbaahinta la hadlay ayaa si adag u dheleeceyay habdhaqanka qori kuris ku doonka ah ee hoggaanka kooxda Ahlu-sunna, wuxuuna ku baaqay in la garab istaago dowladda Galmudug.
Webiga Shabeelle oo Fatahaad Sameeyey iyo dad barakacay
Warar 25 October 2021 17:17
Dowladda oo ciidankii ugu badnaa u daabushay Guriceel
Warar 25 October 2021 17:12
Banaanbaxayaal: Qoor Qoor iyo Farmaajo doonimeyno, dhiig Sokeeye doonimeyno
Warar 25 October 2021 12:37
Ciidamo ka tirsan xoogga dalka iyo booliska gaarka ah ee Haramcad, ayaa dhawaan laga daad gureeyay Muqdisho, kuwaas oo qorshuhu yahay in ay ka dagaallamaan Gureceel.